(၁၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအလွတ်သဘော အစည်းအဝေး (15th ACDFIM) တက်ရောက်ရန်အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့်မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထွက်ခွာ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မတ် ၇၊ ၂၀၁၈ မတ် ၇၊ ၂၀၁၈
(၁၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များအလွတ်သဘော အစည်းအဝေး (15th ACDFIM) တက်ရောက်ရန်အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့်မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထွက်ခွာ
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၁၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် များအလွတ်သဘော အစည်း အဝေး (15th ACDFIM) တက်ရောက်ရန်အတွက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည် တော်လေဆိပ်မှထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစင်ကာပူနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Venessa Chan နှင့်တာဝန်ရှိသူများကလေဆိပ်တွင်ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှနှင့်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါသွားကြသည်။ခရီးစဉ်အတွင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်များအလွတ်သဘောအစည်းအဝေး (15th ACDFIM) တက်ရောက်ခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးကာလအတွင်း အာဆီယံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များနှင့် နှစ်နိုင်ငံသီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နေ့လယ် ပိုင်းတွင် စင်ကာပူတပ်မတော် Paya Lebar Airbase သို့ရောက်ရှိရာ စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးဌေးအောင်၊ မြန်မာ စစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးကြီး ဆန်းညွန့်ဦးနှင့် စင်ကာပူ တပ်မတော်မှအရာရှိကြီများ ကလေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
စငျကာပူနိုငျငံတှငျကငျြးပပွုလုပျမညျ့ (၁၅)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ မြားအလှတျသဘော အစညျး အဝေး (15th ACDFIM) တကျရောကျရနျအတှကျ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျ တျောလဆေိပျမှထှကျခှာကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ရေ)ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (လေ)ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျော၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောတိုငျး စဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာစငျကာပူနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mrs. Venessa Chan နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားကလဆေိပျတှငျပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဇနီးဒျေါကွူကွူလှနှငျ့ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး) မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား အဖှဲ့ဝငျအဖွဈလိုကျပါသှားကွသညျ။ခရီးစဉျအတှငျး တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျသညျ အာဆီယံတပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျမြားအလှတျသဘောအစညျးအဝေး (15th ACDFIM) တကျရောကျခွငျးနှငျ့ အစညျးအဝေးကာလအတှငျး အာဆီယံတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျမြား နှငျ့ နှဈနိုငျငံ သီးခွားစီတှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျးမြား ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ နလေ့ယျ ပိုငျးတှငျ စငျကာပူတပျမတျော Paya Lebar Airbase သို့ရောကျရှိရာ စငျကာပူနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံ သံအမတျကွီး ဦးဌေးအောငျ၊ မွနျမာ စဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးကွီး ဆနျးညှနျ့ဦးနှငျ့ စငျကာပူ တပျမတျောမှအရာရှိကွီမြား ကလဆေိပျတှငျ ကွိုဆိုနှုတျဆကျခဲ့ကွသညျ။
နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး အမြင်(၄)မြင်ဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားလေ့လာသုံးသပ်ကြရန်လို
အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0